SomaliTalk.com » Soomaaliya oo ka jawaabtey qoraalkii Washington Post ee sheegashada caruurta da’da yar ee ah in xuquuqdooda aas’aasiga ah ay ku xadgudbeen ciidammada ammaanka Soomaaliya
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Thursday, May 12, 2016 // 2 Jawaabood
Tr. May 11,2016
Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay aad uga walwalsan tahay sheegashada caruurta da’da yar ee ah in xuquuqdooda aas’aasiga ah ay ku xadgudbeen ciidammada ammaanka Soomaaliya, sida lagu sheegay war lagu daabacay wargeyska The Washington Post , 7-da May 2016.
Annaga oo ka mid ah dowladaha saxiixay cahdiga Qaramada Midoobey ee xuquuqda caruurta , arrintaas waxa aan u eegi doonnaa si rasmi ah, sheegashooyinkaasi waxaa baari doona hey’adaha qaranka ee u xilsaaran, waxaanan soo saari doonnaa warbixin waqtiga ugu dhow ee suuragalka ah,iyadoo la qaadayo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah .
Xukuumadda Soomaaliya waxa ay adeegsaneysaa qaabab kala duwan oo sharci ah dagaalkeeda guusha leh ee dhanka milatari iyo midka fikir ee ka dhanka ah argagixisada. Al shabaab waxaa ku tiirsan tahay mayal adayg iyo ciidammeynta caruurta si ay u fuliso rabshadaheeda fuleynimo ee ka dhanka ah dadka raidka ah ee Soomaaliya iyo waddamada deriska ah. Mid ka mid hababka ay dowladdu u maareyso arrinkani ayaa ah dhaqan celinta , waxaana ka dhab ah inay taageerto da’yarta ka fallaagowday, kana goosatay kooxdii ay ka tirsanaayeen si mar kale dib loogu dhex milo shacabka, ayna u noolaadaan nolol macna leh oo ka fog xadgudub iyo argagaxiso.
Xukuumadda Soomaaliya iyo dhammaan hey’adaheeda waxa ay leeyihiin sharci adag oo wax ilaaliya , iskaba daa in lagu xadgudbo xuquuqda aas’aasiga ee dhammaan muwaadiniinta , si gaar ah kuwa aadka u tabarta daran sida caruurta.
Xukuumadda Soomaaliya waxa ay tixgelineysaa dhammaan dhalinteeda da’da yar , waxaana ka go’an inay wanaajiso noloshooda si ay ugu suuragasho ka qeyb-qaadashada iyo ka faa’ideysiga horumarka iyo horusocodka ummaddooda. iyadoo taasi ay jirto, waa arrin aad looga xumaado waqtigan adag oo argagaxisadu iyo rabshaduhu ka jiraan dunida daafaheeda , caruurtu waa kooxda ugu horeysa ee dhibanayaasha ah oo waajib ay tahay in si degdeg ah oo dhammeystiran ay u taageeraan dowladaha iyo kuwa bah-wadaagga la ah .
Xukuumadda Soomaaliya waxa ay si dhow ula shaqeyneysaa dhammaan ururada arrinkan ku shaqada leh si sare loogu qaado wacyi-gelinta ku saabsan xuquuqda carruurta iyo dhaqan-gelinta xaqqooda. Tani waxa ay sii xoojin doontaa ambaqaadka lagu xaqiijinayo yididiiladeena qaranka, loogana dhabeynayo horumarka guud ee joogtada ah.
La xiriir: Jama Bulhan
Abdi Warsame ayaa idinku casumayso Shir looga Hadlaayo Isticmaalka Section 8ka
May 11, 2016 (MINNEAPOLIS) Shir looga hadlaayo isticmaalka waraaqaha Section 8ka ayaa lagu qabanaayaa hoolka shirarka xaafada Cedar Riverside ee Brian Coyle. Section 8 ayaa ah barnaamij lagu kaalmeeyo kira dhiibayaasha saboolka ah oo aan aboodin in ay la baxaan kiradooda.
Gudoomiyaha Degmada 6’aad Mudane Abdi Warsame iyo madaxweyne kuxigeenka golaha degaanka Magaalada Minneapolis Marwo Elizabeth Glidden ayaa idin kusoo dhawaynaya, inaad fikradihiina ka dhiibataan isticmaalka waraaqaha Section 8ka gudaha Magaalada Minneapolis.
Kumanaan Somaali ayaa isticmaasha Section 8, iyagoo mararka qaarkood la kulmaan dhibaatooyin la xiriira isticmaalka Section 8ka. Fadlan kasoo qaybgala islamarkaana na ogaysiiya dhibaatooyinka aad la kulantaan, si aan idinkugu ololayno, dhibaatooyinkiinana aan u gudbino.
Date: Friday May, 13, 2016.
Location: Brian Coyle Center – 420 15th Ave S, Minneapolis, MN 55454
R.wasaaraha oo la kulmay ururada dhalinyarada kalana hadlay ka qeybgalka dhalinta ee siyaasada
Muqdisho, May 10, 2016—–Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Sharmarke ayaa maanta qaabilay dhalinyaro mataleysay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka, waxaana kulankan ku wehlinayay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka.
2 Jawaabood " Soomaaliya oo ka jawaabtey qoraalkii Washington Post ee sheegashada caruurta da’da yar ee ah in xuquuqdooda aas’aasiga ah ay ku xadgudbeen ciidammada ammaanka Soomaaliya "
Dr. A.F. Dualeh says:
Thursday, May 12, 2016 at 10:45 am
Soomaaliya laba argagixiso ayaa ka jira:
1- Alshabaab iyo inta ku tiirsan oo faka duubta
2- NISA oo lagu magacaabo ciidanka ammaanka oo iyana
Marka la eego lana miisaamo dhibaatada iyo tacadiga ay ummadda soomaaliyeed ku hayaan, goonni ahaan da’yarta dhallinyarada soomaaliyeed, farqi weynu uma dhaxeeyo, oo labaduba si naxariis daran ayay ummadda ugu xad gudbaan, dawlad tacadigaas baahay ummadda ka badbaadiyaana dalka kama jirto.
Taana waxaa sii dheer, iyadoo dawladaha shisheeye ee xabsiyada iyaga u’ gaarka ah Muqdisho iyo Villa Soomaaliya dhexdeeda ka samaystay, ay da’yarta soomaaliyeed inta loo soo qab-qabto, ay godadkooda xeebta ku dilaan dhallinyaro farabadanuna sidaa ku maqantahay.
Washington Post been ma sheegin, ee tacadi baahay, oo ciidamada CIA ee America ay qaybweyn ka yihiin ayey in yar ka taabatay!!!
Thursday, May 12, 2016 at 10:35 am
Af been bartay oo ay beentu dhaqan u’ tahay, runta sheeg laguma karo.
Muddo dheer, haba ugu darnaadeen 4tii sano ee ugu dambaye, waxaa caado ahayd, inta ay xagjirku dhallinyaro (carruur) marin habaabiyaan in aad uga badan in, gaar ahaan, magaalada Muqdisho, ciidamada booliska iyo kuwa afka duuban oo loogu magacdaray CIIDANKA AMMAANKU oo iyana sida argagixisada afka duubta, inay caadeysteen carruur dugsi waxbarasho loo diray, waddada inay ka afduubtaan, kadibna waalidkood lagu qasbo inay xabsiga ka soo iibsadaan!!!